600 DAAWO:-Alshababkii ugu Badnaa oo Hargaysa Galay. | khaatumo news online
DAAWO:-Alshababkii ugu Badnaa oo Hargaysa Galay.
Sep 13, 2020 - 6 Aragtiyood
Magaalada Hargaysa, ee xarunta maamulka somaliland waxaa ka taagan cabsi xoogan dhawrkii maalmood ee u danbeeyay,
Cabsidan Amni oo sababtay in maamulka somaliland ciidamo badan soo dhoobo wadooyinka Hargaysa ,iyo Burco,
Somaliland ayaa ogaatay in xubno kamid ah ururka alshabab ay soo galen gudaha Hargaysa iyo Burco, kuwaaso doonaya inay fuliyan weeraro sida ay sheegayso xogta khaatumonews helayso,
Dhanka kale sarakiisha Booliska Burco ayaa qiray inay qabten rag looga shakiyay alshabaab
Lasoco wixii soo kordha khaatumonews
Hasugi waayin INAY KADHEX toostaan mujaahidiintii inagodane iyo AFKAANI IYO Kuwii AY DHALEEN ee Kahayaamay HARGAYSA BURCO ceerigaabo waxaad Eegnaa in AL AL CADAALAD USAMAYSO KOONFURTA SOMALIYA IYO WAQOOYIGA ALXAQIIQA WAA LAYS OGYAHAY KUWA KOONFUR KU DHEX WAASHAY EE DOONAYA INAY GUR YAHOODII KUSOO NOQDAAN
Al sheydaan, iyo argagexida shicibka iyo maatida gumaada waa caqligii soomaaliya lagu yiqiiney ee maaha kii somaliland
KASTUUMO WEB XAARMAAJO
HOOYADAA BAA LAGU WASAA HARGAISA
ILMA XAARAAN WECEL AH
CAR IDINKU SOMALILAND REPUBLIC KAALAYA HA LAYDIN FOORFOORIYO’E
AL SHABAAB BAAD SHEEGAYSAA’E HAWADA SOMALILAND REPUBLIC SHIMBIRA AYAAN SOO DUL MARIN
Cinwaan khaldan shacabka masaakiinta ah , oo nacayb ku jiro , kala saar nacayba aaydu u qabtaan maamulka somaliland iyo shacabka masaakiinta ah ,hadii aad maamulka neceb tahay hubka qaado intaad sheeydaan manaxa ah adeeg sanaysid !
War Horta Muse yaalataliya? jabuuti kuma xirma Ethiopia-xumayd kumaxirna .
Ileen somaliland Iyo Alshabaab Awalba Iskuma dhici jirin, Salaadiinta iyo Somaliland iskuma dhici jirin. Nin karmeedka iyo Afkuxooglaha iyo Somaliland iskuma dhici jirin.
Mise Dakadii Somali land lagu ahaa l Ee lawada cuni jirey ayaa Carab manaxa ah u gacangashey
Adeer dalku ma ahaa kii Soomaaliya ee ay AMISOM iyo argagixsadu maamulayeen. Dalku waa Jamhuuriyaddii Somaliland ee ku caanka baxday aminiga iyo ammaanka oo ciidamada amnigu ay sugayaan amniga magooyinka dalka hooyo taas oo ah wax iska caadiya oo joogta ah laakiin sida taliyuhu sheegay ma jiraan wax cusub oo dalka ku soo kordhay.